Un classique sans compromis : le t-shirt homme SR ( Sexy Rugby ) | Boutique rugby : Sexy Rugby
सम्झौता बिना क्लासिक: SR (सेक्सी रग्बी) पुरुषको टी-शर्ट
स्वागत » सम्झौता बिना क्लासिक: SR (सेक्सी रग्बी) पुरुषको टी-शर्ट
13 डिसेम्बर 2018
ध्यान, तपाइँ प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ यो राम्रो टी-शर्टक्लासिक र कालातीत। पुरुषका लागि यो आधारभूत कुनै पनि अवसरमा लगाउँदछ, र कुनै पनि मौसममा। यसको उच्च-अन्तमा समाप्त हुनेहरूले तपाईंलाई बहकाउनेछ, जस्तै रंगहरूमा विस्तृत छनौट तपाईंमा उपलब्ध छ सेतो रग्बी कपडा पसल।
सेक्सी रग्बी द्वारा देखी क्लासिक पुरुषहरु को टी-शर्ट
यो टी-शर्ट सबै पुरुषहरूको लागि हो, र सबै आकृतिहरू! सात आकारको (S, M, L, XL, XXL, 3XL र 4XL) को कुलमा उपलब्ध, यो टी-शर्टले सबै पुरुषहरूलाई आराम दिन्छ र डबल स्टिचि withको साथ उच्च-अन्त फिनिशहरू दिन्छ। सेक्सी रग्बी बुटीकमा, यो दर्जन रंगहरूमा आउँदछ, जुन: हेदर ग्रे, ग्रेफाइट ग्रे, सेतो, कालो, रातो, नौसेना, हरियो, शाही निलो र पहेलो, आकाश निलो, खाकी हरियो र अन्तमा, निलो डिवा!
यो रग्बी कपडा को एक प्रमुख उत्पादनहरु मध्ये एक हो सेक्सी रग्बी पसल। र यो, यसको बहुमुखी र यसको सरल र गम्भीर शैलीको कारणले। यसमा 100% कपासको हुन्छ, हेथर खैरो रंगको बाहेक जसमा 15% भिसेज पनि समावेश गर्दछ। यसको कपडा ठूलो प्रतिरोध हो (185 g / m²)। यसको सीधी कट संग, यो सबै को लागि एक राम्रो पहने आराम प्रदान गर्दछ। उहाँको कपास सास हुन्छ र गर्मीमा समेत पहन सक्छ।
तपाईं यस रग्बी कपडाको लागि कस्ता रंगहरू घुम्नुहुन्छ?
यो टी शर्ट एक असली क्लासिक को फैशन हो जुन सबै अवसरों को लागि पहना छ। तर पनि वर्ष भर, विभिन्न शैलीहरू मार्फत। यो गर्मीको शर्ट या जेन्ससँग एक क्लासिक शैलीको लागि जोडिन्छ जुन हरेक समयमा काम गर्दछ। जब चिसो फिर्ता आउँछ, आफ्नो साथ आफ्नो नजर सजाउनुहोस् सेक्सी रग्बी पुरुषहरु स्वेटर तपाईंको टी-शर्टसँग मेल खान्छ। यसरी, राय एकमत हो र पुरुषहरू त्यसलाई प्रेम गर्छन। छुट्टै छुट्टयाउनेहरूलाई माया गर्नेहरूलाई दिनुहोस्, र रंगीन टुक्राहरू संग उनीहरूको वरिपरी बर्षभरि लुगा लगाउँनुहोस्!
पुरुषको रग्बी शर्ट
भिन्टाग टी-शर्टe नयाँ सेक्सी रग्बी संग्रह को
रग्बी, बक्कर, टी-शर्ट, हूडिस, पोलस, सामानहरू
«सेक्सी रग्बी मा अन्तिम घण्टा छूट
पुरुषहरु को लागि रेट्रो बक्कर, क्लासिक द्वारा सेक्सी रग्बी »